कसरी ब्याकलिङ्कहरू सर्पमा मेरो साइट रैंक सुधार गर्न टिप्पणी गर्न सक्छ?
तपाईंले टिप्पणी ब्याकलिंकहरू निर्माण गर्न र यस प्रविधिलाई नकारात्मक रूपमा पूर्वनिर्धारित बारे धेरै भयानक जानकारी सुन्नुभएको छ. यद्यपि, म तपाईलाई एक क्षण लिन चाहन्छु र खुल्ला दिमागमा यो रणनीतिमा पुग्न चाहन्छु. यस रणनीतिको खराब प्रतिष्ठाको बावजूद, ब्याकलिंक रणनीतिको रूपमा ब्लग प्रयोग गरी तपाईंलाई आफ्नो संभावित ग्राहकहरु संग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न र आफ्नो बजार आला भित्र आफ्नो ब्रान्ड प्राधिकरण को निर्माण गर्न मद्दत गर्न सक्छ।. यद्यपि, तपाईंलाई राम्रो एसईओ परिणाम प्राप्त गर्न टिप्पणी ब्याकलिंकहरू बनाउनको लागि एक सही दृष्टिकोण हुन आवश्यक छ. अन्यथा, तपाईले खोजी इन्जिनको आँखामा संदिग्ध लाग्न सक्नुहुनेछ र स्प्यामी लिङ्क निर्माण प्रविधिको लागि दण्ड पनि पाउन सक्नुहुनेछ.
यस आलेखमा हामी लिङ्कको रस प्राप्त गर्न नयाँ तरिकाहरू छलफल गर्नेछौं. तपाइँ अघि पढ्नु भएको सबै कुरा बिर्सनु सक्नुहुन्छ. हामी तपाईसँग साझेदारी गर्न जाँदै हुनुहुन्छ जुन कुनै पनि लिंक लिङ्क निर्माण प्रविधि जस्तो देखिन्छ जस्तो कि डाउफाइबल, न्युफिल, खोजी सर्तहरू वा तपाईंले सुन्न सक्ने अन्य चीजहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ।.
टिप्पणी ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्ने नयाँ तरिका
दायाँ ब्लगहरू फेला पार्नुहोस्
तपाईंको लिङ्क इमारत अभियानको सुरुवात चरणमा, तपाइँ त्यहाँ त्यहाँ लिङ्कहरू सिर्जना गर्न सही ब्लगहरू खोज्नु पर्दछ।. तपाईं आफ्नो बजार आला अनुसन्धान सञ्चालन गर्न र वेब स्रोतहरू जुन केही उत्कृष्ट ट्राफिक र संलग्नता प्राप्त गर्न आवश्यक छ. यो उत्तम उद्योग ब्लगहरू हेर्नको लागि स्पष्ट छैन. यसको सट्टा, तपाईं माध्यो पीआर ब्लगहरू वा फोरमहरू यसमा केही महत्त्वपूर्ण सक्रिय टिप्पणीकारहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ.
तपाईलाई के आवश्यकता छ पत्ता लगाउन को लागी, तपाईं केवल Google मा एक विशेष प्रश्न सम्मिलित गर्न सक्नुहुन्छ. उदाहरणका लागि, यदि तपाईंको व्यवसायले चिकित्सा क्षेत्रमा सेवा गरिरहेको छ भने, तपाइँ एक सर्च इन्जिन सोध्न सक्नुहुनेछ "TOP Medical Blogs" वा "चिकित्सकहरुको लागि फोरम. "नतिजाको रूपमा, तपाइँ केहि सामाजिक शेयरहरूमा आधारित ती ब्लगहरूको सूची प्रदान गर्नेछ र ती ब्लगहरू प्राप्त गर्ने टिप्पणीहरू.
तपाईंले आफ्नो व्यवसायको लागि उपयुक्त पाएको बेला वेब स्रोतहरूको आवश्यकता छ, तपाईं शाखा जारी राख्न सक्नुहुन्छ टिप्पणीकारहरूको निम्न ब्लगद्वारा तिनीहरूको ब्लगमा. यसले तपाईंलाई साथी साथीहरूको आधार बढाउन मद्दत गर्नेछ.
तपाईंको ब्लग को आयोजन गर्दै छन्
तपाईंको उद्योग मा ब्लग को ट्रैक राखन को लागी Google Reader मा आरएसएस सदस्यताहरु को उपयोग गर्नुहोस।. प्रत्येक विषय वेबसाइटको लागि फरक फोल्डरहरू सिर्जना गर्नुहोस्. यस प्रक्रियालाई स्ट्रिमिङ गर्दै, तपाइँ कुन कुन सामग्रीहरू भर्खरै अद्यावधिक गरिएका छन् जुन देख्नेछन्.
पहिलो हुन को लागी प्रयास गर्नुहोस्
टिप्पणी टिप्पणी को निर्माण गर्न को लागि यो सलाह छैन कि कष्टप्रद मंच को तरिका मा लिंक केवल लेख अप्रासंगिक, स्पैम टिप्पणिहरु. तपाईं पहिलो पानामा टिप्पणी छोड्ने पहिलो व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ, तर मात्र पढ्न व्यापक रूपमा पढ्नु र तीतो र व्यावहारिक प्रतिक्रियामा सोच्नुस्. यदि तपाईंको प्राथमिक लिङ्क संलग्नक र बिन्दुमा छट्छ भने, अन्य टिप्पणीकर्ताहरूले प्रायजसो यो क्लिक गर्न क्लिक गर्दछन् कि तपाई को हो भनेर जाँच गर्न सक्नुहुनेछ. यही कारण हो यदि तपाईं पहिलो हुनुहुन्छ भने, तपाईंका परिवर्तनहरू यदि तपाईले अन्य टिप्पणीकारहरू पछि पार्टी पाइरहेका भन्दा उच्च हुनुहुन्छ Source .